M/weynaha cusub ee Barcelona ayaa dadaal ugu jira sidii Messi uu u sii joogi lahaa kooxda… – Hagaag.com
M/weynaha cusub ee Barcelona ayaa dadaal ugu jira sidii Messi uu u sii joogi lahaa kooxda…
Posted on 13 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Madaxweynaha cusub ee Barcelona, ​​Juan Laporta, ayaa dhigaya taabashadii ugu dambeysay ee ku saabsan dalab uu u soo bandhigi doono xiddiga ugu horreeya kooxda, Lionel Messi, si uu uga dhaadhiciyo inuu joogo oo uu cusbooneysiiyo qandaraaskiisa, kaasoo dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Laporta ayaa waxaa u qorsheyan inuu la kulmo Messi aabihiis – oo ah wakiilkiisa – maalinta Isniinta, kulankii ugu horeeyay ee labada dhinac tan iyo markii uu yimid madaxweynaha cusub ee kooxda reer Catalan, ka dib doorashadii dhacday horaantii bishan.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka “Mundo Deportivo”, Laporta ayaa u soo bandhigi doona Messi cusbooneysiinta heshiiska si looga dhimo mushaharka uu haatan qaato sababo la xiriira xaalada dhaqaale ee kooxda iyo saameynta uu ku reebay dhibaatada cudurka Corona.
Madaxweynaha kooxda reer Catalan ayaa raadin doona inuu ka dhaadhiciyo xiddiga reer Argentina mashruuciisa isboorti, madaama uu qorsheynayo inuu la soo saxiixdo weeraryahanka reer Norway Erling Haaland xagaaga soo aadan, iyo daafaca Bayern Munich David Alaba, marka lagu daro Aguero oo ah weeraryahanka Manchester City iyo saaxiibka ugu dhow Messi.
Laporta ayaa sidoo kale hubin doona inuu sii wado inuu ku tiirsanaado jiil cusub oo ciyaartoy da ‘yar ah kuwaasoo cadeeyay awooda ay u leeyihiin inay mustaqbalka ay hogaamiyaan Barcelona.
Wargeyska ayaa sheegay in Laporta uu sidoo kale u soo bandhigi doono Messi jagada safiirnimo ee kooxda marka uu ciyaaraha ka fariisto, taas oo damaanad qaadaysa in laacibku la sii joogi doono kooxdii uu ku qaan gaadhay, isagoo iska xaadiriyay markii uu ahaa 13 jir.
Laporta uma muuqdo inuu heysto boos adag inta lagu guda jiro wadahadalada marka loo fiiriyo dhibaatada dhaqaale ee heysata kooxda, iyo rabitaanka kooxo kale inay soo jiitaan Messi oo u balan qaadaya dhaqaale wanaagsan oo qandaraas, laga bilaabo xagaaga soo aadan.
Sikastaba, madaxweynaha kooxda reer Catalonia ma qarin rajada uu ka qabo inuu ka dhaadhiciyo Messi inuu la sii joogo kooxda, wuxuuna si isdaba joog ah ugu nuux nuuxsaday intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada in Messi uusan ka tagi doonin Barcelona.